Kocaelispor-Gölcüksporပွဲစဉ်နောက်ထပ်ဘတ်စ်ကားတောင်တက် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliKocaelispor-Gölcüksporပွဲစဉ်နောက်ထပ်ဘတ်စ်ကားတောင်တက်
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Kocaelispor Gölcükspor Mac အတွက်နောက်ထပ်ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းများ
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ulaşımpark Inc ကို 10 စက်တင်ဘာလ 18.30 Kocaelispor မှာအင်္ဂါနေ့မှာကစားပါလိမ့်မည် - Gölcüksporစိုက်ပျိုးရေး, တူရကီဖလား2။ အပိုဆောင်းဘတ်စ်ကားအဆိုပါခြေစစ်ပွဲပတ်ပတ်လည်ပွဲစဉ်ထဲသို့သွင်းထားခဲ့ကြသည်။ တစ်မြို့ဒါဘီပွဲစဉ်ဖွဲ့စည်းဘတ်စ်ကားတော်တော်များများအချက်များမှာတက်မတ်တပ်ရပ်အဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်, နိုင်ငံသားများအားကစားကွင်းမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးပါလိမ့်မယ်။
CITY CUP ရင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုဒါဘီအလိုတော်ဒိုင်နိုဆော
အင်္ဂါနေ့ကမြူနီစီပယ်ulaşımpark Inc ကို Kocaeli အားကစားကွင်း, တူရကီဖလား2တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ ချပြီးဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလျော့ပါးစေရန်တိကျသောအပိုဆောင်းဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများနှင့်ကိုက်ညီရန်Gölcükspor - Kocaelispor ပတ်ပတ်လည်အရည်အချင်းပြည့်မီ။ ထိုသို့ဖြစ်သောကြောင့်အကြီးအတိုးနှင့်အတူမြို့ဒါဘီပရိတ်သတ်တွေကွဲပြားခြားနားသောအချက်များမှာဘတ်စ်ကားကနေသားကောင်ကိုဖယ်ရှား3ဖြစ်လိမ့်မည်။
KARAMURSEL KS ကနေ 750 ရွှေ့မည်
3 အချိန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်သားကောင်များအတွက်အားကစားကွင်းမှ Karamursel, အများဆုံးဝေးလံခေါင်သီခရိုင်၏တဦးတည်း၏စုစုပေါင်းအတွက်နိုင်ငံသားများulaşımpark။ Degirmendere - - Başiskele - ထို 16.45 နှင့် 17.00 နာရီအတွင်းအသီးသီး Karamursel ဘတ်စ်ကားထဲကနေရေအိုင်ရွှေ့ဖို့နောက်ဆုံးတော့နှင့် Kocaeli အားကစားကွင်းသို့ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
150 KS ထက်ပင်လယ်ကွေ့
Karamursel ပရိတ်သတ်တွေ Kocaeli အားကစားကွင်းအတွင်း3အချိန်စုစုပေါင်းနှင့်အတူပင်လယ်ကွေ့ဒေသ၌ရှိသကဲ့သို့, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဒီအလယ်ပိုင်းဒေသတွင်နေထိုင် heren ဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေကနေနာရီ 17.00 သရုပ်ဆောင်ဟာတှေအမြားကွီးဘောလုံး groove တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ အချိန် 16.30, 16.40 16.50 နှင့်ဘတ်စ်ကား, ဗဟိုပင်လယ်ကွေ့Kirazlıyalı, Derince ထံမှထွက်သွား Izmit နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိသတ်တွေပေးလိမ့်မယ် Kocaeli အားကစားကွင်းသို့ရောက်ကြ၏။
15KS ထံမှနည်းပြ Terminator KOCAELÝ
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်, Akçarayပုလွန်းဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မည် 15KS တံခါးဝလိုင်းကုဒ်။ ပရိတ်သတ်တွေနာရီအရေအတွက်က 17.00KS 15 ကနေ Shuttle လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် dial မှအားကစားကွင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်, ဘတ်စ်ကား terminal ကိုရန်လမ်းရထားသို့ရောက်ကြ၏။
ulaşımparkမှ Kocaelispor ပွဲစဉ်အခွင့်ထူး 06 / 09 / 2019 affiliates ulaşımpark Inc. မှ Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစတင်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုဖြင့်အားကစားကွင်းဒီနှစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ Fethiyespor Kocaeli အားကစားကွင်းများတွင်ရာသီသစ်7မှာ 2019 မေလ 19.00 စနေနေ့3ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များအနေဖြင့်ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားလိုင်းများဖွင့်လှစ်, ကိုက်ညီမှုတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပရိတ်သတ်တွေရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် Kocaelispor မှာဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် TIME လိမ့်မယ်လက်စွပ် 15KS, အလွန်းတဲ့ Metropolitan 15KS ရေတွက်လိုင်းများ၏မြူနီစီပယ်၏နိုင်ငံသားများအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်သကဲ့သို့, အားကစားကွင်းမှယခုနှစ် Kocaelispor ပရိတ်သတ်တွေရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဘတ်စ်ကားဘူတာ - Akçarayလမ်းရထားခရီးသည်ထံမှအားကစားကွင်းရောက်ရှိဖို့အထူးသဖြင့်, 15KS Kocaeli အားကစားကွင်းအကြား၎င်း၏ Shuttle ဆက်လက် ...
Kocaelispor-Sultangazi Eskisehir YHT Expeditionary Mung နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုများအတွက် 20 / 04 / 2016 Eskisehir နောက်ထပ် YHT Expeditionary ဝယ်လိုအားများအတွက် Kocaelispor-Sultangazi Mung: Sultangazi ၏ Kocaelispor ထို့နောက်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းပွဲစဉ်ကိုကြီးစွာသော mobility başladı.hodrရင်ပြင်ဝါသနာရှင်အသင်းမှတနင်္ဂနွေ Eskisehir Ataturk အားကစားကွင်းအတွင်းအရပ်ဌာနနှင့်သမိုင်းဝင်မြို့၏ကြေညာချက်နှင့်အတူဆော့ကစားရန် xnumx.lig သွား အဆိုပါပွဲစဉ်များအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘတ်စ်ကားကစားပါလိမ့်မည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးအချိန်ကိုမြန်နှုန်းရထားနှင့်ဆက်စပ်သောအပိုဆောင်းအစပျိုးထားလိုက်ပါတယ်။ မိမိအပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်များအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ဂိမ်းဦးတည်ပရိသတ်တွေအများကြီးသတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။ Kent, တနင်္ဂနွေနီးပါး Eskisehir မှပြောင်းရွှေ့ပါလိမ့်မယ်။ ESKISEHIR BIG ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ TFF တစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြီးနောက်တမြို့လုံးအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကစား-ပိတ်ရက်စွဲများနှင့်နေရာများ၏ဖော်ပြချက်နှင့်လိုက်ဖက်လာ Sultangazi xnumx.lig နှင့်အတူ Kocaelispor အကြားကစားပါလိမ့်မည် ...
Konya YHT-Eskisehir အတွက်ပွဲစဉ်များအတွက်အပိုဆောင်းအချိန် 29 / 12 / 2013 Konya YHT-Eskisehir အတွက်ပွဲစဉ်များအတွက်အပိုဆောင်းအချိန်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက် Konya torque Konyaspor-Eskisehirspor ပွဲစဉ်များတွင်ကစားပါလိမ့်မည်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အားကစားတူတူဒရောစူပါလိဂ် 17 ။ အိမျတျော၌ torque ရက်သတ္တပတ် Konyaspor Eskişehirsporအလိုတော်ဧည့်သည်။ အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မည်သည့်ပြဿနာမျှကိုရှောင်ရှားဖို့ပွဲစဉ်၏နေ့တစ်ခုထပ်တိုး YHT လေ့လာရေးခရီးတင်လိုက်တယ်။ Konya မီးရထားဘူတာဒါရိုက်တာ Yalcin Tekkale, AA ကိုသတင်းထောက်တွေကိုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မဟုတ်သူကိုသူတို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပြင်းထန်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့နောက်ထပ်အချိန်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအကဲဖြတ်ရန်လာခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ သူတို့ကပြင်းထန်သောဂိမ်း Tekkale ကျနော်တို့တစ်ချိန်ကပိုပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုပေါ်တွင်တင် "တစ်ဦးအပြုသဘောမတှေ့တောင်းဆိုချက်များကိုပြောနေကြပါတယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းထင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအစတောင်းဆိုနေပြီရထားလေ့လာရေးခရီး; တနင်္ဂနွေ Eskisehir ထွက်ခွာအချိန် 10 ။ 00 အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် ...
Konyaspor-Besiktas ပွဲစဉ်များအတွက် TCDD YHT ကနေအပိုဆောင်းတောင်တက် 26 / 12 / 2014 TCDD YHT တောင်တက်ဖို့နောက်ဆက်တွဲ၏ Konyaspor-Besiktas ပွဲစဉ်: Konya torque Konyaspor-Besiktas ခုနှစ်တွင် 15 အကြားကစားပါလိမ့်မယ်။ Konya ဖို့တူရကီကြောင့်တိုးပွားလာခရီးသည်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန် YHT အပိုဆောင်းအချိန်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်သမိုင်းအတွက်ဒီဇင်ဘာလ 28 2014 ရက်သတ္တပတ် Spor တူတူဒရောစူပါလိဂ်ပွဲစဉ်။ Konya torque 28 2014 ဒီဇင်ဘာလ Konyaspor အတွက်ကစားပါလိမ့်မည်သည့် TCDD ကဖန်ဆင်းထားတဲ့အစီအစဉ် - Besiktas, အားကစားတူတူဒရောစူပါလိဂ်ကိုက်ညီအားကစား၏ပြန်လာလမ်းခရီးဘို့အပိုဆောင်းအချိန်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်တူရကီ YHT ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ Konya ၏ဒီဇင်ဘာလ 28 2014 ရာဇဝင်များ - Konya YHT အပြင်တူရကီ YHT 22.05 '' ဘူတာရုံထည့်သွင်းခဲ့သည်အခြိနျ မှစ. 23.00 အတွက်ရွှေ့မည်။
ulaşımparkထံမှအမျိုးသားပွဲစဉ်အထူးဘတ်စ်ကားလိုင်း '' 05 / 09 / 2019 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် affiliates Co. , 06 စက်တင်ဘာလ 2019 20 မှာသောကြာနေ့ulaşımpark: 45 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားရေးအသင်း 2021 U21 ဥရောပချန်ပီယံရှစ်အုပ်စုခြေစစ်ပွဲပွဲစဉ်ကိုအထူးဘတ်စ်ကားလိုင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားများ၏အားကစားကွင်းမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးသွားမှာပါကိုက်ညီသည့် Kocaeli အားကစားကွင်း, မွန်းစတားအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကစားပါလိမ့်မယ်။ 750 - 750: ညွှန်ကြားမှု 19 အတွက် Kocaeli အားကစားကွင်း - ပို့ဆောင်ရေး 00KS KARAMURSEL နဲ့အတူ 19KS အရေအတွက်ကလိုင်း Karamursel ဘတ်စ်ကားဘူတာ - Değirmendere - Golcuk - İzmit 15 နာရီအတွက်အချိန်နားလည်သဘောပေါက်ရန်။ ယူလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်မှတ်တိုင်များ၏နိုင်ငံသားတွေကိုကယ်နှုတ်သောအမျိုးသားစိတ်လှုပ်ရှားအားကစားကွင်းမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အမျိုးသားအားကစားကွင်းလာရန်စိတ်လှုပ်ရှား နေ့မှစ. အသက်ရှင်ရန်ပို့ဆောင်ရေး 150KS နဲ့ပင်လယ်ကွေ့ ...
ulaşımparkမှ Kocaelispor ပွဲစဉ်အခွင့်ထူး
Kocaelispor-Sultangazi Eskisehir YHT Expeditionary Mung နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုများအတွက်
Konya YHT-Eskisehir အတွက်ပွဲစဉ်များအတွက်အပိုဆောင်းအချိန်
Konyaspor-Besiktas ပွဲစဉ်များအတွက် TCDD YHT ကနေအပိုဆောင်းတောင်တက်
Trabzon မြို့တော်, ထိုပွဲသို့အခမဲ့လွန်းဘတ်စ်ကားဖွဲ့စည်းထားပါတယ် 1400
အဆိုပါမြို့တော် Expeditionary တာရှုမွို့Çamlıyaylaကနေပထမဦးဆုံးဘတ်စ်ကားအကြား